Kedu ihe bụ Lego Boost: Ntuziaka iji mara ya nke ọma - Ọka
Inicio >> Ihe eji egwuri egwu >> Kedu ihe bụ LEGO Boost
O sitere na 3 isi brik ma ọ bụ iberibe:
Ogige nwere Bluetooth na otu hub na 2 motors.
Nke abụọ mpụga moto
ma agba agba na anya ihe mmetụta.
A na-eme mgbakọ dị iche iche na ntuziaka ndị a n'akụkụ atọ a. Mana ndị a bụ isi n'ihi na ha bụ ikike na-akwalite. Enwere ike dochie ihe ọ bụla n'ime ihe ndị ọzọ, mana akụkụ ndị a dị mkpa dị mkpa.
Ọ bụrụ n'ịzụrụ ya, chọpụta ihe niile ị chọrọ ịma banyere ya Bugharịa Hub
Nzukọ 5 a kọwara dị ka ndị a. Onye ọ bụla na-abịa dị iche iche hụ na i meziri, nke ị ugwu ọhụrụ ngwa na unlock kpọghee ekwt ọhụrụ mmemme blocks. Ruo mgbe ị gbagoro ma gosipụta na ntọala ahụ na-arụ ọrụ, ha agaghị ekwe ka ị gaa n'ihu.
Ọ bụ ọnụ ọgụgụ dị mma, nke na-abata n'uche mgbe mmadụ niile na-eche maka LEGO® Boost, n'ihi na ọ bụ a robot na a "humanoid" udi. Ọ bụ montage na-echetara anyị echiche ahụ anyị niile bu n'uche nke robot.
Ọ bụ ezigbo ọchị. Na Vernie anyị nwere ike ijikwa mmegharị ya, ọ na-aga ihu na azụ ma na-agbanye onwe ya, na axis ya kwụ ọtọ. N'ụzọ dị otú a anyị na-eme ka ọ gbanwee.
Ọ naghị emegharị aka ya. Anyị nwere ike iji aka ya bulie ihe. Akụkụ dị jụụ nke otu ngwa bụ na ọ na-enye anyị ohere ịgba ihe ngosi LEGO, dị ka ihe ngosi.
Ngwa ahụ na-abịa na Playmat, maapụ eserese ya mere anyị nwere ike ịmegharị robot ahụ.
A nnọọ na-akpa ọchị Montage na ụmụ agbọghọ hụrụ n'anya. Ọ naghị emegharị ahụ, ọ na-emegharị isi ya na ọdụ ya ma na-emekọrịta ihe ụfọdụ, agba, ụda, wdg.
N'oge a, nzukọ 2 fọdụrụ, ọ bụ nke kachasị emetụta m. Enwere m nkụda mmụọ ma echere m na isi nsogbu bụ na enweghị ozi gbasara blọk ahụ ma ebe ọ bụ na ị maghị ihe nke ọ bụla bụ, ị maghị etu esi eji ya n'otu oge na otu esi emekọrịta.
Anya ọ dị ezigbo mma ma na-emekwa ka ihe frets na-eji koodu agba na anya na ihe mmetụta agba na iji ihe dị iche iche rụọ ọrụ na motọ motọ na moto mpụga.
Kedu ihe bụ aha Multi-Tooled Rover, ihe dị ka ọtụtụ ngwaọrụ Rover (ụgbọala).
Ọ kabatabeghị ya, mana site na ihe m hụworo na m ga-enwe mmasị na ya, ọ na-agagharị ma na-agbapụ. Na na o meriela ọtụtụ ihe.
Onye na-ewute onwe ya
Nke a bụ obere usoro mmepụta iji wuo obere ụdị LEGO®
Ozugbo ha zukọtara, m ga-ahapụ echiche m ebe a.
Uru na ọghọm ya. Nke kacha mma na nke kacha njọ
Dị ka ngwaahịa niile, ọ nwere ihe dị mma na nke na-adịghị mma. Ana m akwado ya. Nke bụ eziokwu bụ na ụmụ anyị nwanyị hụrụ ya n'anya ma a hụkwara m ya n'anya ma ewezuga nsogbu ole na ole na ihe m ga-ekwu maka ya, ọ na-atọ ụtọ ma dịkwa mfe iji.
Ihe m masịrị LEGO Boost
Na blọk enweghị ndị na-ekwu okwu na ụda ọ na-arụ na ihe ọ na-ede bụ site na mbadamba nkume ma ọ bụ ngwa mkpanaaka. Ọ na-efunahụ ọtụtụ amara mgbe, mgbe ị kwusịrị gbasara nzukọ ahụ ị mere, mbadamba nkume ị na-ejide emechara.
Ndakọrịta ngwaọrụ. Zụta ihe eji eme robotics na ịchọpụta na mbadamba gị enweghị dakọtara bụ otu n'ime mkpesa kachasị m hụrụ na ịntanetị. Enweghị m nsogbu, ọ bụ ezie na parity na Bluetooth na-enye m nsogbu na mbadamba Huawei ma anyị ga-amanye ya dịka m kọwara nke a nkuzi.
Ọnụahịa ahụ. Ọfọn, ọ bụ ọnụ ahịa dị elu, ọ bụ eziokwu, nke m chere na ọ bara uru, mana ị ga-ahụrịrị na ụmụ gị ga-enwe mmasị na ya.
Akwụkwọ. O doro anya na ọ bụ nke kachasị njọ na ahụmịhe niile. Agbanyeghị na ngwa ahụ na - eduzi gị n'ihe niile ị ga - eme, ọ nweghị ebe ha na - akọwa ihe ngọngọ mmemme ọ bụla bụ maka ya ma ọ bụrụ na i jighi ya ma ọ bụ na onye ọzọ karịa ndị chịkọtara ya were ya, ị maghị ihe ị ga - eme na ọtụtụ blocks.
Echere m n'ezie na okwu gbasara akwụkwọ bụ ihe ha kwesịrị ile anya ma dozie site na LEGO.
Ihe m masịrị
Ihe na-amasị m bụ na ọ na-enye ụmụaka ohere ịga n'ihu na ịmụ ihe n’adabereghị na nke a ọ masịrị ha nke ukwuu.
Na mgbakwunye, a na-enweta nsonaazụ na-enye afọ ojuju ngwa ngwa. Na ihe anyị anaghị eweda ha ala
Dị ka ọ bụ LEGO, anyị nwere ike ịme mgbanwe ọ bụla anyị nwere ike iche n'echiche. Na anyị nwere ike iji atọ pụrụ iche blocks na legos anyị nwere n'ụlọ maka ihe ọ bụla ọzọ mgbakọ. Ha ga-eme ka brik anyị nwee mmekọrịta.
O dakọtara na LEGO Classic na Tecnich
2 5 ndọtị
2.2 Frankie nwamba
2.5 Onye na-ewute onwe ya
3 Uru na ọghọm ya. Nke kacha mma na nke kacha njọ
3.1 Ihe m masịrị LEGO Boost
3.2 Ihe m masịrị